बिहे गर्ने बेलामा सानीमैया ११ वर्षकी थिइन्। धुमधाम राम्री। गोरी, ठूलाठूला आँखा। मान्छे सारै बेस, सबको भलाइ गर्ने। सबैलाई माया गर्ने। त्यस्तो भएर पनि कसरी मरिहालिन् … – Sanchar Patrika
July 21, 2020 239
मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा मुवाले अड्की–अड्की, दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई पुराना कुरा गर्नुहुन्छ। गएको ६ असारमा मुवाले ७८ वर्षअघि भित्र्याएकी बुहारी ‘सानीमैया’ (मेरी सासू अंगूरबाबा जोशी) स्वर्गे हुनुभयो।
मुवाले बुहारी बितेको कुरो थाहा पाउँदा “उनी भाग्यमानी रैछन् !” भन्दै रुनुभएको थियो। ११ वर्षकै उमेरमा बुहारी बनेर भित्रिनुभएकी सानीमैयाबारे मुवाले साह्रै गाह्रो मानेर कुरा गर्नुभयो। दुःखको घाउ धेरै कोट्याउन पनि उचित ठानेनौं। मुवाको सम्झना उहाँकै शब्दमाः
म नै उसलाई ‘आउ बा’ भनेर कपाल चुल्ठी पारिदिने, लुगा फेरिदिने गर्थें। बाहिर जाने बेलामा वा तामदानमा उनको माइत जाने बेलामा सिंगारपटार पार्ने गौरी भन्ने थिई, उनले गर्थिन्
पद्मकन्यामा राम्रो पोजिशन थियो उनको। पद्मकन्यालाई कस्तो राम्रो तुल्याइन्। हजारौं केटीहरूलाई पढाइ दिएर सब स्वास्नीमान्छेको उन्नति हुने काम गरिन्
माहिली महारानी असाध्यै डाहा गर्ने, त्यो बाहुनकी छोरीले के के गरिन् भनेर। अनि काम भाँड्न खोज्ने। उनको बानी खराब
सारा दुःख परेकालाई उद्धार गर्दै जाने, सपार्दै जाने, धर्म गरेको त हो नि ! जे होस् नाम गज्जब कमाइन्।
पछि प्राइज पनि खडा गरिन् (डा. बलराम जोशी ज्ञान विज्ञान राष्ट्रिय पुरस्कार)। सबले कति तारिफ गरे। सानीमैयाको मान धेरै ठूलो थियो। सानीमैया काममा व्यस्त भएको बेला बल्लाम पनि त्यस्तै पढाउने काममा व्यस्त हुन्थ्यो। बच्चाबच्ची हेर्न मान्छे राखेको थियो।
उनी त ठाउँ ठाउँ घुमेकी थिइन्। सबतिर गएकी थिइन्। चाइना, रसिया ससिया सबतिर गएकी। मैले धेरैअगाडि दशैंमा सानीमैयालाई मन्त्र सुनाएकी थिएँ। मलाई माया गर्थिन्। मैले भनेको सबै ‘हस्’ भनेर गर्थिन्। मैले बुन्न सिकाएँ। अनि त बच्चाको स्वेटर, लुगाहरू सब बुन्थिन्। सिउन पनि सक्थिन्।
सानीमैया कसरी बितिन् कसरी, केही थाहा भएन। ज्यास्ती काम गर्थिन् पहिला, त्यसैले सञ्चो भएन। के बिरामी थियो, अस्पतालमा राखे। दुःख भयो धेरै। अनि खत्तम भइन्। मेरो मनमा साह्रै दुःख आउँछ, बा। केही भन्नै सक्दिनँ। घर धुमधाम शून्य भयो। उल्टो भयो…
(किरणराज जोशी र रूपा जोशीसितको कुराकानीमा आधारित/हिमाल खबर पत्रिकाबाट )
Prevराजा बिरेन्द्र पढने कलेजमा पढेका सन्जु बबा – कुनै समय ठमेलका डन कुरा सुन्दा पत्रकारको रोकिएन आशु (भिडियो)